Rakkoo Ummata Oromo Sa,udii Jiruu | Fighting for Freedom and Equality
Rakkoo Ummata Oromo Sa,udii Jiruu
Motummaan sa,udii jiota sadeen dabran keysa labsii baasee ture , labsiin kan algaa huda laallatu ture yero duraanii innis alagaan biyya tanatti jiraatu hundi heeraa isaa serreyfachuu qaba ka ja,u labsiin. Amma garuu ummatuma Oromoo fi kan Itophiyaa hafan qofarratti bobbahamaa jira.
Guyyaa Sadaasa 5, 2013 akkuma labsii kana hujirra olchuuf bobbahaniin labsiin kuni kan lammi biraa tokkollee hin ilaalle hujiin nutti agarsiisan. guyyuma kana ganamarraa sa,a 7tti nama lammii oromoo maqaan isaa Umaree Abduraman Alii Rasaasaan rukutanii ajjesan.
Namni guyyaa kana osoo heeraa biyyaa gutuu qabuu qabamee manatti gidraa argaa jiru nama 25 oli tahu .. Mana dhiira keysa qaban garii durreyyee fii hattuun senudhaan dubartii gudeedanii bakka garittiis meshaa mana gurratanii deeman.
Haalli kuni mufannaa guddaa jiraattota lammilee ethiopiarratti umeen guyyaa Sadaasa 9, 2013 lammileen kanneen iddoo takkatti walitti qabamuun biyya tenyaatti maatii kenya waliin nu galchaa jechuun gaaffii seeraa dhiheyfatanillee polisii sa,udii fii durreeyyee sa,udiin marfamanii dullii…
← Saudi Arabia: Extreme Brutality Against Migrants From Ethiopia
Gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa Kaalaabaaritti shaakallii taasise →